बजेट पुस्टीकामा त्रुटी भएको कांग्रेस नेता रिजालको भनाई
१९ जेठ, काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ को बजेट पेश गर्दा बजेट पुस्तिकामा त्रुटि भएको भेटिएको छ । आइतबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी नेपली कांग्रेसका सांसद डा. मिनेन्द्र रिजालले उक्त त्रुटिबारे जानकारी गराउँदै अर्थमन्त्रीको जवाफ माग गरेका थिए ।